Sehatra fijanonana Ho amidy sy manofa amin'ny Realtyww Info
Navoakan'i Daniel Brewer
View Sehatra fijanonana Published 1 month ago
Toerana fijanonana dia toerana iray voatondro ho an'ny fiantsonana, na voapetaka na tsy manana. Ny toerana fijanonan'ny fiara dia mety ho ao amin'ny gara fijanonana, na amin'ny toeram-piantsonan-tsakafo na eny an-tanàna. Matetika habaka voamariky ny fanamarihan'ny lozabe. Ny fiara dia mifanentana ao anaty habakabaka, na amin'ny alàlan'ny fiantsonana mifanila, parking na zoro na tsy misy faizina mihintsy. Arakaraka ny toeran'ny toerana fijanonan'ny zaridaina, misy ny fitsipika arakaraka ny fotoana omena zaridaina sy ny sarany andoavana ny fampiasana ny toerana fijanonana. Raha ny fangatahana mivezivezy any anaty habakabaka dia mety hihoatra ny zaridaina mankany amin'ny sisin-dàlana, ahitra ahitra ary toerana hafa izay tsy natao ho an'ny tanjona.